Munasabado ciido waaweyn ah oo la xuso nolosha oo shan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Imaansha dalka Iswiidhan / Munasabado ciido waaweyn ah oo la xuso nolosha oo shan
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 22 8 2018
Munsaabada kaniisad kusoo dhaweeynta
Boqolkiiba 45 ee carruurta dalka Iswiidan lagu dhalo waalidkood waxeey horgeyeystaan kaniisada Iswiidan. Sido kale waa caadi in waalidka canuga marka ee magac siiyaan xaflad loo qaabto canuga. Waxaa loo yaqaan munaasabada magac siinta Munaasabada kaniisad ku soodhaweeynta ama munsaabada magac bixida waxaa caado inta badanaa uu ah in xaflad logu dhigo guriga oo lagu casumo asaabta iyo reerka. Martida waxeey hadiyad siiyaan canuga.
Xaqiijin (xaflad kaniisadeed)
Xaqiijinta waxeey ku saabsan tahay caqiido krishtan. Waa munaasabad kaniisada loogu dhigo dhalinyarada ayadoo lagu xaqiijiaayo munsabaadii kaniisad ku soo dhaweeynta. Inta badana 14 sano ayee jiraan marka ee maraan xaqijinta. Dhalinyaradii hore ayaa ka badneed dhalinyarada maanta marka loo iskugu bardhigo dhanka xaqijinta. Munaasabaas kadib waxeey inta badana xaflad uu dhigaan qaraabada iyo reerka. Waxaa caado ah in qofka maray xaqijinta la siiyo hadiyo.
Dadka badana ee guursado waxeey dhigtaan xaflad ee ka soo qeeyb galaan qaraabada iyo asxaabta. Martida waa ka qeeybqaataan nikaaxa. Nikaaxa waxaa ka danbeeyo casho iyo xaflad ciyaar. Wazaa caado ah in martida hadiyado siiso labada isguursatay.
Reer xusaya maalin dhalasho. Masawirqaade: Colourbox
Dad badan waxeey xusaan maalinta ee dhasheen Waxaa caado ah in caruurta da'da buuxsato xaflad yar (kalas) uu qabtaan asxabtooda. Xaflada yar marka la joogo caruurta waa ciyaaraan, keegna waa cunaan. Canuga sanadka buuxsanaayana waxaa la siiyaa hadiyada. Dadka waa weeyn ee da'da buuxinaayano waa loo xafladeeyaa. Asxaabta iyo qaraabada dhow waxeey hadiyad siiyaan qofka da'da buuxinaayo. Dadka qaarkood waxeey si gaar ah uu sii xafladeeyaan marka ee gaaran tiro siman, tusaale ahaan 50 sano.
Waxaa caado ah in qofka marku uu dhinto xilliga aaska la tago kaniisada ama goob-xusuuska yar. Goob-xusuuska waa dhismo yar ama qol la isticmaalo badalka kaniisada. Inta badanaa waxaa aaska ka soo qeeyb galo reerka iyo asxaabta dhow.